မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ တတိယအတွင်းဝန် Ms. Suzumi Sekine (ခေါ်) ဒေါ်မေဥမ္မာလွင်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း။ ၂၉. ၁၀. ၂၀၁၉ (အင်္ဂါနေ့) မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ…
South East Asia Security Sector Governance Forum 2019 သို့တကျရောကျဆှေးနှေးခွငျး သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာလလေ့ာရေးအဖှဲ့ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာနိုငျဆှဦေးသညျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ…
Geostrategic Perspective Competency Course (Batch 3/2019)
“Geostrategic Perspective Competency Course” by Thayninga Institute for Strategic Studies (Batch 3/2019) September, 2019 သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့…
Geostrategic Perspective Competency Course(Batch 2/2019)
“Geostrategic Perspective Competency Course” by Thayninga Institute for Strategic Studies (Batch 2/2019) August, 2019 သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့…
Geostrategic Perspective Competency Course (Batch 1/2019)
“Geostrategic Perspective Competency Course” by Thayninga Institute for Strategic Studies (Batch 1/2019) July, 2019 “Geostrategic…
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ Stakeholder Meeting သို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း ရန်ကုန် စက်တင်ဘာ ၃ သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးသည် ယမန်နေ့က အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်ချမ်းရေးဗဟိုဌာန…